Boeny: ho ampiharina amin’ny fomba hentitra ny lalànam-paritra mikasika ny saribao | Région Boeny
Boeny: ho ampiharina amin’ny fomba hentitra ny lalànam-paritra mikasika ny saribao
250 hatramin’ny 300 ha ny velaran’ala ripalka atao saribao isan-taona eto Boeny araka ny antontan’isa nomen’ny Talem-paritry ny Tontolo iainana sy ny Ekolojia, ny Ranomasina ary ny Ala (DREEMF) eto an-toerana, Rtoa Rakotoarimanana Josette.
Efa manaonao foana ireo mpanao saribao ankehitriny hoy kosa ny Ben’ny Tanànan’Ambondromamy vaovao, fa tato anatin’ny valo taona izao dia ripaka hatramin’ireo nosokajiana ho ala arovana ary efa ny foto-manga indray izao no asesiny, rehefa avy naripany ny hazo manary na palissandre.
Mijaly izahay hoy kosa ireo mpitatitra saribao amin’ny kamiao mandalo ny lalam-pirenena faha-4, fa mahatratra 120 000 ariary eo, miainga any Ambondromamy mandra-pahatonga aty Mahajanga ny vola takian’ireo zandary isan-karazany aminay amin’ny RN4, vao tody aty amin’ny “client” ny saribao entinay.
Misy ve, ny lalàna mamaritra fa ny zandary mpisava dia mahazo mitaky vola amin’ny mpitatitra saribao, ka mahatonga anareo tsy maintsy mandoa izany vola izany isaky ny mandeha? Hoy kosa ny fanontanian’ny Komandin’ny Zandarimariam-pirenena eto Mahajanga, tamin’ireo mpitatitra.
Tsy misy mihitsy tamberim-bidy niditra, azo avy tamin’ireo fanamboarana sy fitaterana ary fivarotana ny saribao hatreto ho an’ny Faritra sy ny Kaomina nivoahany hoy kosa ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Saïd Ahamad Jaffar, raha nanokatra ny fivoriana mikasika ny fijerena izay mety hampiharana ny lalànam-paritra 21-12/REG-BN/CR/SG/DDR, mifehy ny rojo-piahariana saribao izy, ny Alarobia 13 aprily tao amin’ny trano fivoariana Bloc administratif Ampisikina.
Santionany tamin’ireo adi-hevitra nifanaovan’ireo mpandray anjara nandritra io fivoriana io ireo. Nitarika izao fikaonan-doha izao, ny Lehiben’ny Faritra sy ny DREEMF Boeny.
Tsiahivina fa ny taona 2012 no efa narafitra io lalànam-paritra 21-12 io, saingy tsy nisy fampiharana. Ny fahatsapan’ireo tompon’andraikitra roa voalaza tetsy aloha fa manararaotra fatratra anatin’ny baranahiny tanteraka ireo mpisehatra eo amin’ny saribao eto Boeny, no nahatonga azy ireo nanapa-kevitra hamolavola didy hampiharana hentitra io lalànam-paritra io.
Ao anatin’ny filozofian’ny fiarovana ny Tontolo iainana sy ny Ala eto amin’ny faritra no hampiharana azy io hoy ny Lehiben’ny Faritra. Kanefa, toy ny rojo-pihariana rehetra koa hoy izy dia tokony hampiditra tamberim-bidy ao amin’ny kitapom-bolan’ny Fokontany, Kaomina sy ny Faritra, ary ny Sampandraharahan’ny Ala, ny mpanamboatra, ny mpitatitra ary mpivarotra saribao. Ary amin’ireo irery ihany no sehatra ara-dalàna tokony handoavan’ny mpitatitra saribao vola hoy izy, fa ny ankoatra izay dia firaisana tsikombakomba amin’ny kolikoly.
Nandray anjara tao avokoa ny solotena maromaron’ny mpitatitra ambongadiny ny saribao, ny avy ao amin’ny DREEMF sy ireo fiaraha-monim-pirenena miaro ny tontolo iainana, Ben’ny tanàna enina voakasika, ny Foibem-paritry ny Hetra sy ny Foibem-paritry ny Angovo ary ny Solika eto Boeny, ny mpitandro filaminana izay nosolontenan’ny Komandin’ny CIRGN Mahajanga, ny Kly Mananga Jean Manasse.
An-tsokosoko ny fanamboarana saribao eto Boeny
Mbola fitrandrahana an-tsokosoko foana no fanamboarana saribao eto Boeny hatrizay ary hatramin’izao hoy ny DREEMF Boeny. Mpanapaka hazo tsy ara-dalàna avokoa, ary iray tsikombakomba amin’ny sasany amin’ireo VOI (Vondron’olona Ifotony) no tena manao izany.
Efa misy ireo atao hoe Brigade mixte de contrôle, na Polisin’Ala mitambatra, natsangan’ny DREEMF isaky ny distrika enina eto amin’ny faritra, ahitana fiaraha-miasan’ny Ben’ny Ala sy ny Distrika na Fokontany ary mpitandro filaminana. Izay afaka misambotra avy hatrany. Efa nisy ny hetsika fisafoana tampoka nataony. Nitsoaka nandositra fotsiny ireo mpanao saribao antsokosoko dia niverina indray rehefa nilamindamina.
Manoloana izany dia tsy maintsy atao ny fampiharana ny lalànam-paritra 21-12, izay mbola ho asiam-panaovazana ny andininy vitsivitsy hoy ny Lehiben’ny Faritra, araka ny tapaky ny mpivory, mba hifanaraka amin’ny zava-misy ankehitriny. Ary ho atolotra tsy ho ela, miaraka amin’izay ny didy fampiharana azy, izay ho arafitra miainga tamin’ireo soso-kevitra tao amin’ity fivoriana ity ihany.
Tapaka nandritra ny fivoriana ihany koa fa homena fiofanana mikasika io lalànam-paritra io sy ny tsara ho fantatra rehetra momba ny rojo-pihariana saribao ireo Ben’ny tanàna voakasika izany, ireo zandary mpisava an-dàlana, ireo Ben’ny Ala ary ireo mpitaky hetran’ny Kaomina sy ny Faritra, fa indrindra ireo mpisehatra amin’ny rojo-pihariana saribao rehetra, izay hanaovana fanisana ary ampidirina ho amin’ny sehatra manara-dalàna.